नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ परेपछि विप्लवलाई धक्का,गर्लान् त आत्मसमर्पण ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ चैत्र २०७५, मंगलवार २२:२२ |
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधि माथि प्रतिवन्ध लगाएसँगै सरकार उक्त समूहप्रति कठोर बन्दै गएको छ ।
सरकारले फागुन २८ यता मात्रै चन्द समूहसँग आवद्ध ६४ जना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरिसकेको छ । मंगलबार मात्रै प्रहरीले आठ जिल्लाबाट १२ जना पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो जिल्लास्तरीय नेताहरु रहेका छन् । प्रहरीले मंगलबार चितवनबाट २ जना, अछामबाट ४ जना, नवलपरासीबाट १ जना, संखुवासभाबाट १ जना, मकवानपुरबाट १ जना, इलामबाट १ जना, सुनसरीबाट १ जना र कास्कीबाट १ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
मंगलबार दिउँसो इटहरीबाट विप्लवका सुनसरी जिल्ला सदस्य पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार मोरङ मोतिपुर स्थायी घर भई इटहरी ५ तुलसा टोलमा बस्दै आएका सूर्य भनिने रमेश खड्का पक्राउ परेका हुन्। ४१ बर्से उनी इटहरी ४ बाट पक्राउ परेका प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
उता गृह मन्त्रालयले पनि चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध कठोर बन्दै गएको संकेत देखाएको छ । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो दश दिनमा मात्रै चन्द समूहप्रति लक्षित दुईवटा प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयले चन्द समूहका केन्द्रिय नेताहरु समेत पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै चैत महिनाभित्रै चन्द समूहका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिइने बताउनुभएको थियो । उहाँले चैत महिनाभित्र चन्दलाई पनि नियन्त्रणमा लिइने दाबी गर्नुभएको थियो । हरेक दिन आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि अध्यक्ष चन्दमाथि दबाब परेको स्रोतको दाबी छ । तर चन्दले भने सरकारले धरपकड जारी राखे सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिदै आएका छन् ।
Previousनेपालमा १० अर्ब बढी लगानी गर्ने एनआरएनको योजना, इन्भेस्टमेन्ट कोष गठनको तयारी
Nextजुलाईदेखि जापान सीधा उडान गर्ने निगमको तयारी,अष्ट्रेलियामा कहिले ?
अष्ट्रेलियामा मे २० देखि नयाँ सडक नियम लागु हुने
३० बैशाख २०७६, सोमबार ०६:४८
एमाले उम्मेदवार द्वारा आत्महत्या
२० बैशाख २०७४, बुधबार ०८:१८